Archive du 20191003
Filaminana amin` ny fifidianana Manana anjara lehibe ny haino aman-jery
Nanatanteraka fifanakalozan-dresaka momba ny fanavaozana ny haino aman-jery ny tetikasa manohana ny fisorohana sy ny fitantanana ny resa-pifidianana sy ny herisetra eto Madagasikara (PEV Madagascar),
Ranary Lala Berthin Erckman Hitondra rivo-baovao ho an’Andoharanofotsy
Ny zava-misy ao amin’ny tanànan’Andoharanofotsy no nandrisika ahy hilatsaka ho ben’ny tanàna noho ny fijalian’ny mponina sy ny fikorontanana be ihany tao anatin’ny fandrosoan’ny tanàna,
Fikambanana malaza 504 Hanafoana ny fanapahana hazo
Nampahafantarin’ny Fikambanana Malaza 504 ny atao hoe C-Solution.
Taksibrosy nandona taksibe Olona roa naratra mafy
Nisehoana loza mahatsiravina teny Andranomena omaly maraina. Taksibrosy iray mampitohy an’Antananarivo amin’ny faritra na irony antsoina hoe nasionaly irony no naka sisiny loatra ka nandona taksibe
Bakalorea nikorontana Porofon’ny tsy fahamatoran’ny fanjakana
Tranga iray azo hanambarana fa tena tsy voafehin’ny fanjakana ny fitantànana ny firenena ny fivoahan’ny laza adina mialoha ny fotoana nandritra ny fanadinana
Lemaka havanan’Antananarivo “Lany raha tsy hamoronana tanàna vaovao !”
Manoloana ny hetsika ataon’ireo mponin’Ambohitrimanjaka sy ny manodidina mikasika ny fanatontosana ny tetikasa Tana
Madagasikara Mbola tena manankarena vorona
Firenena manan-karena vorona isika eto Madagasikara. Raha araka ny fanazavan’ny profesora Hajanirina Rakotomanana omaly mantsy dia
Lucien Rakotomaharavo “Laharam-pahamena ny fanabeazana olona”
“Amiko, nahatonga ahy nandeha niaraka amin`ny antoko Tia Tanindrazana, maro ny zavatra hita sy tsapa amin`ny fitantanana ara-politika teto amin`ny firenena. Resy lahatra fa handeha amin ny